အမျိုးသားများအလုပ်သွားရင် သက်တောင့်သက်သာဝတ်သွားနိင်တဲ့ အဝတ်အစား၆မျိုး – Sunthit Myanmar
သင်မနက်မိုးလင်းတိုင်း အလုပ်သွားရင်ဘောင်းဘီတို၊ T-Shirt နဲ့သွားချင်တဲ့လူဟာသင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။ အလုပ်သွားတိုင်း style pant ၊ necktile စီးပြီးသွားရမယ့်ဥပဒေမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် အချို့အလုပ်များက ကုတ်အင်္ကျီ၊နက်တိုင် စီးရမှ ဖြစ်မယ်ဟုပြောရင် သင့်တွင်ရေးချယ်စရာမရှိပါ။ ယခုပြောမယ့် အဝတ်အစားပုံစံ ၆ မျိုးက သင်နေ့တိုင်းအလုပ်သွားနေကျ ပုံစံကိုပြောင်းလဲပေးနိင်မှာပါ။
(၁.) Wolf and Shepherd Oxford Shoes
ရှုးဖိနပ်ဝတ်မယ်ဆိုရင် အညိုရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အထူးသဖြင့် ခြေဖိနောက် အနောက်က်ပျော့နေမှ သင်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါပေါ့ပေါ့ပါးပါး လျှောက်နိင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂.) Men’s Jogger Pants
သင့်အလုပ်က ဘောင်းဘီကိုတစ်သတ်မတ်တည်း ဝတ်စရာမလိုဘူးဟု သတ်မှတ်ထားပါက Jogger Pant ဝတ်ပါ။ ရှုးဖိနပ်ကိုတော့ လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံစီးပေးပါ။
(၃.) Classic Shirt
Shirt အင်္ကျီကို Body Fit အကျပ်ဝတ်စရာမလိုပါ။ ဂျိုင်းနားတအားမကျပ်ဘဲ လက်အလွယ်တကူလှုပ်ရှားလို့ရအောင်ဝတ်ပါ။ အကျီအရောင်ကို အရမ်းမတောက်ဘဲ ရိုးရှင်းတဲ့အရောင်ရွေးခြယ်ပါ။
Jacket လို့ပြောရင် အလုပ်အတွက်ကုတ်အကျီ အမြဲဝတ်ရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ Hddie ဝတ်ပြီးအလုပ်သွားရင်လည်းမသင့်တော်ပါ။ ဒါကြောင့် Jacketကို အမဲသို့မဟုတ် အပြာရောင်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း Jacketက သင့်အတွက်ပိုပြီး အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ဆွယ်တာကို နွေရာသီမှာတော့မဝတ်သင့်ပါ။ ဆောင်းရာသီမှာဝတ်ရင် အရင်ဆုံးရှပ်အင်္ကျီဝတ်ပါ။ ပြီးမှဆွယ်တာကို ရှပ်အင်္ကျီအ်ပေါ်မှ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆွယ်တာကိုဝတ်ထားပါက သင်ချွေးတစ်လုံးလုံးထွက်နေမှာ အသေအချာပါ။
ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ ရှုးဖိနပ်စီးပြီးအလုပ်သွားတဲ့လူတွေကို သင်တွေ့ဖူးမှာပါ။ ဂျင်းဘောင်းဘီကို အမြဲမဟုတ်ဘဲ classic အရောင်အပြာနှင့်အမဲသာ ဝတ်ဆင်ပါ။ ခေတ်ဟောင်းတယ်ဟု အချို့ကယူဆပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှုတော့ အပြည့်ရှိနေမှာပါ၊
Published February 19, 2018 By waihtun
Categorized as Lifestyle Tagged အမ်ိုးသားမ်ားအလုပ္သြားရင္ သက္ေတာင့္သက္သာ၀တ္သြားနိင္တဲ့ အ၀တ္အစား၆မ်ိုး
အီရန်မှာ ပျက်ကျခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ကို ကယ်ဆယ်ရေးတွေ ရှာဖွေနိုင်ပြီ